युएईद्धारा मङ्गल ग्रह जाने यानको सफल प्रक्षेपण, किन जान चाहान्छ युएई मँगल ? - सिम्रिक खबर
युएईद्धारा मङ्गल ग्रह जाने यानको सफल प्रक्षेपण, किन जान चाहान्छ युएई मँगल ?
५ साउन, काठमाण्डौ । संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) ले मँगल ग्रहमा जाने पहिलो यानको सफल प्रक्षेपण गरेको छ ।
मँगल ग्रहको मौसम र जलवायुको अवस्था बारे अध्ययन गर्नको निम्ती सो विमान पठाइएको हो, जसले ५० करोड किमिको दुरीमा त्यहा पुग्नेछ । जापानमा रहेको तनेगसिमा अन्तरिक्ष केन्द्रबाट एचटूए रकेटमार्फत सो प्रक्षेपण गरिएको बिबिसीले लेखेको छ ।
यस अघि पनि दुएईले दुइवटा प्रक्षेपण प्रयास गरेको थियो । तर खराब मौसमको कारण सफल हुन भने सकेन । उक्त यान आउने २०२१ को फेब्रुअरीमा त्यहा पुग्ने विश्वास बैज्ञानिकहरुले लिएका छन् । यस मिशनलाइ युइईले होप मिशन नाम दिएको छ ।
हालसम्म अमेरीका, रुम, युरोप र भारतले मात्रै अन्तरिक्षयानको यात्रा र अध्ययनमा सफलता हासिल गरेका छन् । अब यसमा युएईले पनि आफ्नो प्रयास थालेको बिबिसीले जनाएको छ ।